June 9, 2012 - Written by Gedo:-Ciidammo Itoobiyaan ah oo wata gaadiid dagaal oo tiro badan ayaa ka soo talaabay degmada Luuq ee gobolka Gedo waxaana ay ka sii gudbeen Degmada Luuq oo ay gacanta ku hayaan ciidamada DFKM iyo kuwa Itoobiya.
Dadweynaha ku dhaqan Degmada Luuq ayaa saaka dareemay ciidamada Itoobiya ee saaka soo buuxdhaafiyey Degmada ,Saraakiisha ku sugan degmada Luuq ee DFKM ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya ay duulaan ku yihiin Baardheere iyo Buur-dhuubo oo ay gacanta ku hayaan Ururka Al-Shabaab.
Goobjoogayaal ku sugan degmada Luuq ayaa saxaafada u xaqiijiyey in ciidamo ka tirsan Itoobiya oo wata gawaarida Tiknikada ay dhaafeen Degmada Luuq ee gobalka Gedo.
Ciidamada Al-Shabaab ee gobalka Gedo ayaa weeraro joogta ah ku qaada ciidamada DFKM iyo kuwa Itoobiya ee ku kala sugan Degmada Garbahaarey iyoYurkud oo ah wado muhiim ah oo isku xirta Bay iyo Gedo
Ciidamada Itoobiya ayaa soo galay qeybo badan oo ka mid ah gobalada Hiiraan ,Bay ,Bakool ,Gedo iyo gobalada Dhexe iyaga oo sheegay in ay taageerayaan ciidamada DFKM .
Ra’iisul wasaaraha dalka Itoobiya Males Zanawi ayaa sheegay bishii hore inay xoojin doonaan dagaalka ay kula jiraan Ururka Al-Shabaab isaga oo si cad u sheegay in ay qabsan doonaan magaalada Kismaayo.